Khubaro Muhiim ah oo ka socota Khubaro ka dib Musiibada tareenka ee Tekirdağ | RayHaber | raillynews
HometareenkaNidaamka Isgaadhsiinta ee IntercityOgeysiiska Muhiimka ah ee Tababarayaasha ee Tekirdag
Ogeysiiska Muhiimka ah ee Tababarayaasha ee Tekirdag
17 / 07 / 2018 Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Dhibaatada ka dib, 24 ayaa hoos u dhacaysa iyada oo tareenadu ka gudbayaan aagga shilka. Khubarada ayaa sheegaya in 2 million tons load loo baahan yahay si loo hubiyo in si buuxda loogu talagalay gawaarida, halka kuwa kale ay rabaan in waddada la beddelo si looga fogaado masiibo la mid ah
Uzunköprü-Halkalı dadka rayidka ah ee 8 24 ayaa naftooda ku waayay shilkii ka dhashay burburkii ciidda ee kuyaala degmada Corlu ee Tekirdağ. 3 maalmood ka dib masiibada, khadka ayaa dib loo furay kadib markii la xiray gawaarida cusub. The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) by shaqada on line ugu, waxaa mar kale la dhigay biraha. Ka dib markii tareen jaban iyo hurdo jaban ayaa la saxay, duulimaadyada khadka ayaa bilaabay mar kale.
Si kastaba ha noqotee, inkastoo tareenku dhaafo, 1 wuxuu ka shaqeynayey goobta shilka toddobaadyo. Shaqaaluhu waxay sii wadaan inay ku shubaan dhagaxda dhaadheer dushooda, ka dibna waxay yiraahdaa mashiinka kabka ayaa la samayn doonaa iyadoo loola jeedo. Dhanka kale, dhagxaanta travertine ayaa dib loo dhigay halkaas oo ciidda lagu dhex marsiiyey culimada iyo tareenka. Shaqaalaha tareenada ee gobolka ayaa sheegaya in xawaaraha tareenku uu hoos u dhaco shilalka iyo in dhagxaanta la ruxruxo si buuxda loo hirgelin doono marka tareenadu ka gudbaan. On line ee 4 socdaalka maalin kasta, tirada rakaabka waxay hoos u dhaceen ka dib markii shilku dhacay.
Professor of Logistics International ee Jaamacadda Okan. Dr. Maalgör Evren ayaa aaminsan in ay wanaagsan tahay in la sii wado duulimaadyada xawaare hooseeya; Sıkıntı Haddii ay jirto kala-gudub xakamaysan shilalka, ma jirto dhibaato. Qaar badan oo koontarool iyo xawaar ayaa la bixin karaa iyadoo la raacayo gaadiidka. Sababtoo ah tareenku wuxuu u baahan yahay in lagu shaqeeyo anshax weyn. Ciladda ugu yar waxay keeni kartaa shil. Tani run maaha haddii ganacsiga caadiga ah la bedelay. Si ay caadi ugu noqdaan, dhagaxyada la dhigo waa in la xasiliyaa. Tani waa waqti-qaadashada. Marka 2 million tan oo tikidh ah ay ka gudubto aaggaas, kaliya xasilinta ayaa la gaarayaa. Taas awgeed, culeys waa in la gudbo. Sidaa darteed, ma jiro marxalad caadi ah mudo cayiman. "
'U DIYAARIN KARTAA MAALINTA'
Canakkale Onsekiz Martina Faculty of Engineering Engineer Jaamacadda Prof.Dr. Faallada dhaarta ee Dogan Perinqi waa sida soo socota;
Yen Haddii guuldaradaas la sameeyo isla sidaasna culeysku waa la badalayaa, haddii gawaarida la dhigo ciidda, oo aan la buuxin dhagxan, waxba waxba ma beddeli doonaan. Waxyaabaha la mid ah ayaa mar kale ku dhaca roobab suuragal ah. Waxaan u maleynayaa in cusbooneysiintani ay noqoto mid la isku qurxiyo. Ma aha xal waara. Goobta ku hareereysan waxay ahayd qalab guri iyo qalajin. Marka ay roobabku da'ayaan, maaddada si sahlan ayaa u dillaacaan oo xiraa cirifka. Ka sokow, kaliya maaha meesha uu shilku dhacay. Waxaan u maleynayaa in badan oo ka mid ah guluubyada ku jira khadka ayaa loo xirxiray roobka. Ma fiicna inaad dayactir sameysid iyadoon kor u qaadin gawaarida ama sameynta buundo cusub. Goobta guud ahaan waa in dib loo eego oo cusbooneysiiyaa. "
'15-20 QALABKA MAGAALADA'
Hasan Bektas, Madaxa Waaxda Gaadiidka United (BTS), ayaa sheegay in khadka loo bilaabay duulimaadyada, "Wax dhibaato ah maaha in la bilaabo duullimaadka. Meesha uu dayactirku socdo, waxay u socon doontaa wakhti xawaare hoose. Marka dhagxaanku si buuxda u fadhiistaan, 10-20 waxay sii wadi doontaa inay mar kale mar kale ku ordo xawaaraha caadiga ah ee maalintii. Laakiin tani maaha xalka, laakiin dhibaatada halkan waxay ku saabsan tahay kaabayaasheeda. Waxyaabaha la mid ah ayaa ku dhici kara roobab suuragal ah. Sidaa darteed; jidka ayaa u baahan in la badalo ".
Digniinta Metrobus ee Khubarada
Turki ayaa ku dhaawacmay shil tareen oo ka dhacay Bulgaria
Khabiir ka socda Turhan: "Calaamadintu waa lagama maarmaan"
Digniinta Taariikhiga ah ee TCDD oo ka timaadda Musiibada Tababaraha ee Chorlu
Ogeysiiska Muhiimka ah ee Bursa T1 Tram Line, Electric Shock
Digniin Muhiim ah oo loogu talagalay Tareenka Burulaştan
RayHaber 17.07.2018 Warbixinta Shirka